Ahoana no fomba hanaovana fanaraha-maso SEO momba ny varotra SEO?
Ny ankamaroan'ny mpanafatra entana mpanangom-baovao dia mety mbola tsy mahatratra ny lanjan'ny liona amin'ny fomba samihafa hanatsarana ny mijery an-tserasera amin'ny valin'ny fikarohana Google. Maro amin'ireo fahitana tsy fantatra ireo dia mety ho mora hita amin'ny fampiharana ny fanaraha-maso SEO amin'ny sehatra SEO amin'ny vanim-potoana. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ahoana raha afaka mamaha ny olana rehetra eo amin'ny sehatra fitadiavana fikarohana ianao, ary koa ny olana momba ny fiovam-po? Ohatra, alohan'ny hanombohana fampiasam-bola be amin'ny fampiroboroboana an-tserasera, fampiroboroboana ny fampielezam-baovao sosialy, na dokam-barotra amin'ny antsipiriany
Eto ambany eto dia asehoko ny fomba hahazoana fandrosoana mahavariana ho an'ny fivarotan-tseraseranao mifototra amin'ny ecommerce miaraka amin'ny fanaraha-maso SEO. Tsy ny filazana fa ny fikarakarana ny fanaraha-maso SEO marina dia nanjary TSY ho an'ny tetikasa maoderina rehetra amin'ny aterineto, raha ny marina dia tsy miraharaha ny vondrona ara-barotra na sehatry ny indostria.
Ndeha isika hanao asa am-pahombiazana ary manomana lisitra fanamarinana ho an'ny fanaraha-maso SEO momba ny varotra SEO. Mba hisorohana ny tsy hafana ara-bakiteny amin'ny fomba maro samihafa namboarin'ny fanamarinana, dia manolo-kevitra mialoha ny zava-drehetra mialoha. Amin'izany fomba izany dia tonga ny zavatra tokony hifantohanao amin'ny voalohany sy ny lehibe indrindra: 1)
Ny olana momba ny fahitana
ny fihodinana. Raha vantany vao vita ny fanaraha-maso SEO varotra SEO, dia tokony hijery ireo loharanon-drakitra rehetra ianao mba hamahana ireo rohy anatiny rehetra mitarika mankany amin'ny 404 pejy, ary hanavao ireo rohy anatiny izay mampihatra azy ireo amin'ny alàlan'ny redirects.
Ny fahitana amin'ny aterineto dia mety hisy fiantraikany amin'ny pejy voasakana, ka tokony hampatsiahivana azy ireo amin'ny taratasy fohy. Mariho anefa fa indraindray ny fanakatonana pejy tsirairay dia mety amin'ny antony ihany koa. Jereo koa ny robot. txt ary mamaha olana hafa mety hitranga aminao.
Miaiky fa ny pejy rehetra amin'ny tranonkala dia mila lohateny an-tsoratra ary filazalazana sahaza ho hita eo anivon'ireo valin'ny fikarohana, Manana ny zava-drehetra amin'ny toerana mety ianao. Raha tsikaritra, ataovy azo antoka ny fametrahana metadata duplicate rehetra, satria mety ho mari-tsindrim-pahaizana ambany izany mba hialana ny lisitra misy anao.
Mamaritra ny famaritana ataonao amin'ny meta ary ataovy azo antoka fa feno tanteraka izy ireo mba hitondràna teny manan-danja iray amin'ny teny lavalava na fehezanteny. Tsy toy ny fanoritsoritana meta ny lohateninao miaraka amin'ny teny fanalahidy dia tsy tokony ho ela loatra. Raha tsy izany, dia mety ho tapaka amin'ny fampisehoana amin'ny SERPs izy ireo.
Manomboka amin'ny fanamafisana ny votoaty dika mitovy. Avy eo, jereo ny pejy hafa ao amin'ny tranonkala avo lenta raha ampy ny votoaty manontolo, toy ny tsy fahampian'ny votoaty manankarena (na dia ho an'ny famaritana vokatra, lisitry ny sokajy, sns.) dia azo raisina ho marika ratsy ho an'ny fitaovam-pikarohana.
Avereno jerena ny rohy rehetra mifandray, satria izy ireo dia tsy mahakasika ny traikefan'ny mpampiasa fotsiny ihany fa mety mitarika mankany amin'ireo pejy misy teboka avo mety. Ataovy azo antoka koa fa tsy misy rohy Alt ianao. Mariho fa mety ho vokatry ny fikojakojana ny tranokala ihany koa izy ireo.
Mitandrema raha manana ny rafitra semantika mety ny votoatinao, ary jereo raha toa ianao amin'ny fampiasana lohateny feno. Ary aza adino ny mampiasa tetika. org, mba hahitanao ny tranokalan-tserasera amin'ny SERPs miaraka amin'ny sombintsombiny feno Source .